Baingan-tsolika mafana be ho an'ny carteaux aluminium
by Delta Engineering / Talata 20 Janoary 2015 / Published in Manual
Ity basy baoritra feno hafanana ity dia natao ho an'ireo carte vita amin'ny aluminium mahazatra izay tokony hasiana amin'ny mari-pana ho an'ny fijerena fahitana na famerimberina.
Raha tsy lehibe ny fanjifana adhesive dia miova ho lay 20 L, ity basy ity no vahaolana mpanelanelana tonga lafatra.
Tsy voatery hametraka izany herisetra be izany intsony ilay mpandraharaha mba handroahana ilay adhesive, satria ny basy dia voan'ny pneumatically ary ampiana amin'ny ergonomic. Ankoatra izany, noho ny fitomboan'ny fanerena, ny basy dia azo ampiasaina ho an'ny tsiranoka avo be ihany koa.
Raha azo zahana ny basy hafanana avy amin'ny 20 ° C ka hatramin'ny 90 ° C, dia azo ampiasaina ho an'ny fangatahana mangatsiaka sy hafana ny basy.
Ny basy cartridge mafana dia manome antoka fa ny fikorianan'ny vokatra dia mety haharitra kokoa, izay mahasoa ny fifehezana ny fizotry ny famokarana.